Maitiro ekuisa yazvino Radeon mutyairi muUbuntu / Mint | Kubva kuLinux
Maitiro ekuisa yazvino Radeon mutyairi muUbuntu / Mint
pandev92 | | Yakurudzirwa, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Kune avo venyu vakatevera nhau dzichangoburwa muPhoronix, zvirokwazvo makatonzwa kuti iyo 12.4 version yevatyairi Catalyst kubva ku AMD, ndiyo yazvino vhezheni chii chinowanikwa kune makadhi Radeon 2000/3000/4000 uye zvingave zvishoma sei, iyi vhezheni haitsigire X.org 1.12.
Ubuntu y Mint Nokusingaperi vanouya nemadhiraivha emahara, zvirokwazvo anopfuura mumwe ane laptop anoona tembiricha yakakwira kupfuura mutyairi ane kodzero uye mune dzimwe nguva senge yangu, iri pakati pegumi nemashanu kusvika pamadhigirii makumi maviri kumusoro. Kutarisa mukati Phoronix Ndakaona kuti ichi ichokwadi, uye handisini ndoga ndaitambura nedambudziko iri, saka ndakatanga kutsvagurudza ndikafunga kutsvaga mhinduro.
Kutanga isu tinoisa kuburikidza neiyi PPA yakaitwa ne Phoronix mushandisi, yazvino git xorg-server-radeon uye ati, tafura ichangoburwa nezvimwe.
Isu tinotevera aya matanho:
Isu tinowedzera iyo ppa:
PPA webhusaiti: https://launchpad.net/~oibaf/+archive/graphics-drivers
Nhanho iri pamusoro inoitwa mune iyo kesi yekuti isu tatova nevatyairi vanouya nekusarudzika mukati Ubuntu / Mint, zvikasadaro isu tichafanira kubvisa mutyairi fglx kuburikidza Synaptic.
Mushure meizvi isu tichaisa iyo vdpau package
Kuti riite basa isu tinoseta iyo package libg3dvl-tafura
Ipapo tinogona kuisa mplayer
Isu tinoedza kumhanyisa kwe nerg2Kunyangwe mune ramangwana zvinoita sekunge zvichakwanisika kumhanyisa mamwe marudzi emakodhekisi.
Ikozvino kuti urwe nedambudziko rekunyanyisa. Vashoma vakatarisa chikonzero chayo uye vakangonyunyuta nezve dambudziko, asi pane mhinduro inogona kuideredza, inonzi mbiri, uye isu tinogona kusarudza pakati pe auto, yakaderera, yepakati uye yepamusoro, neizvi isu tinogona kudzora simba redu re gpu. Mune yangu nyaya ndakaisiya yakaderera.
Sezvo shanduko ingangove yenguva pfupi, tinoita zvinotevera kuitira kuti system igare ichitanga pasi.
uye mukati tinonyora:
Izvi zvaitwa, tinoponesa.
Isu takadzorerazve uye isu tinofanirwa kuve needu system kumusoro uye kushanda zvakakwana.
Izvo hazvina kufanana nekushandisa iyo yepamutemo ATI mutyairi, asi zvirinani uyu wemahara mutyairi ari kuvandudza uye zvirokwazvo munguva pfupi iri kutevera tichakwanisa kunakidzwa izere vhidhiyo yekumhanyisa, chinhu chete chinonyatsokanganisa ndiko kupenya, ini handidi ' t ndinoziva chaizvo nezvazvo.saka, asi hei, ini ndicharamba ndakamirira kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Yakurudzirwa » Maitiro ekuisa yazvino Radeon mutyairi muUbuntu / Mint
Ini ndinokanda izvi, tinoponesa.
Ehe zvakanaka, zvaitwa.
Zvisinei, mhinduro yacho yakanaka chose asi muPhoronix vari kutaurawo kuti maDrivers eADD ari kuwedzera zvishoma nezvishoma, izvo zvandisingafunge kuti zvinogamuchirwa nekuti mamwe makwikwi atove nerutsigiro rweOpenCL, OpenGL zvakati wandei, asi zvakanyanyisa uye kutsigira X. org pasina matambudziko. Imwe yacho ndeyekuti wayland inosvika, iyo inongotsigirwa naNoveau nevamwe vatyairi vemahara, izvo zvingave zvakanaka kuti Nvidia, AMD neIntel vatore basa rekutsigira Wayland, iyo Nvidia yakaramba zvachose asi inozopedzisira yasiya.
Ndinosiya girama kwauri, zvinova ndizvo zvaunofarira. Iwo madhiraivha emahara eamd anotsigira zvinhu zvakawanda zvatovepo uye zvimwe zviri kuvandudzwa, tichifunga kuti iro rakavharwa mutyairi rutsigiro rweopencl rinotyisa, haugone kutarisira zvakawanda mune yemahara, isu tichaona, kune rumwe ruzivo pano:
Mazuva makumi mana nemakumi manomwe asina kugadzirisa kukanda kuduramazwi ... Ruramisa "Echo" uye riipe h ... Yaitwa.
Pindura kuna Filo
Kana iwe unogona kushandisa iyo beta, 12.6.
Iyo beta 12.6 inouya isina rutsigiro rwemakadhi pamberi peiyo 5000 akateedzana, zvirinani yangu radeon 4650, haishande.
Zvinonyadzisa zvakadii ... 🙁 Pane zvishoma nezvishoma zvasara kuisa parutivi icho chandinacho, kubva pane zviuru zvishanu.
Kune mamwe zviuru zvishanu anotova nechuru che5000, ndinovimba hauna kukanda imwe yeiyo ... xD, ndinofungidzira yako 4000 ichine makore maviri asara.
rudolph alexander akadaro
Sekuziva kwangu ndinoti vanoti kuburitswa uku kamwe chete, zvinoenderana nezvandakaverenga, kana tsanga itsva kana xorg ikabuda, madhiraivha aya haagare zvachose, zvinoita kunge zvinonyadzisa asi zvakanaka kuchinja kadhi.
Pindura kuna rodolfo alejandro
Sudo echo "yakaderera"> / sys / kirasi / drm / kadhi0 / mudziyo / simba_profile
Iyo yakakodzera kune ese makadhi uye nechero mutyairi?
Ehe, kune vese asi iwo 7000 akateedzana, yeuka kuti kana iwe uchitangazve kumisikidza, kunze kwekunge waichengeta mu rc.local
Jordi Verdugo akadaro
Ndatenda zvikuru nechinyorwa chino, chakandibatsira kuve neazvino mahara mutyairi weAtI HD4330 yangu. Zvandaive nedambudziko: Mavhidhiyo ari paYouTube akaonekwa aine mavara asiri iwo. Mukupedzisira, mhinduro yacho yaive yakapusa sekubvisa mapakeji ane chekuita neVDPAU sezvo zvinoita sekunge Youtube flash yaiita kuti ishande. Chinhu chinonakidza ndechekuti mamwe mawebhusaiti ane flash vhidhiyo senge Vimeo kana iwo mavara akataridzika zvakanaka saka ndafungidzira kuti haashande.
Zvakanaka pano mapakeji andakabvisa: vdpau-va-driver uye libg3dvl-mesa.
Iye zvino zvese zvakakwana.
Pindura Jordi Verdugo
Flash yakaipa nekuti iyo ubuntu 12.04 vhezheni ine matambudziko ne libvdpau1 package pane Nvidia makadhi, uye ini handingashamiswe kana chimwe chinhu chakafanana neicho iwe chaunotaura pane ino posvo chikaitika: vdpau-va-driver.
Mune ino link zvese info: http://askubuntu.com/questions/117127/flash-video-appears-blue
Uchishandisa VIM: Basic Tutorial.
Vazhinji Verenga pane Ngatishandise Linux: Chivabvu 2012